မြစ်ဆုံနဲ့ ပတ်သက်ပြီး NLD ပါတီရဲ့ ရပ်တည်ချက် ဘယ်လိုရှိလဲ …. - People Media Myanmar
Home မြစ်ဆုံနဲ့ ပတ်သက်ပြီး NLD ပါတီရဲ့ ရပ်တည်ချက် ဘယ်လိုရှိလဲ ….
မြစ်ဆုံနဲ့ ပတ်သက်ပြီး NLD ပါတီရဲ့ ရပ်တည်ချက် ဘယ်လိုရှိလဲ ….
“မြစ်ဆုံနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကာလမှာ ပြောခဲ့တာတော့ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒါဟာ ရွေးကောက်ပွဲကတိက၀တ်တော့မဟုတ်ပါဘူး” ဒေါက်တာမျိုးညွှန့်(NLD ပါတီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ)
“မြစ်ဆုံစီမံကိန်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်လမ်းညွန်တဲ့အတိုင်းပဲ နိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေး၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် အဖက်ဖက်ကနေ ရေရှည်ကိုကြည့်ပြီးတော့ ဆုံးဖြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဆုံးဖြတ်ပြီး တဲ့အခါမှာလည်း တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုအပြည့်နဲ့ ပြည်သူကို ဘာကြောင့်ဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုတာ ရှင်းပြမှာ ဖြစ်ပါတယ်” ဒေါက်တာမျိုးညွှန့်(NLD ပါတီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ)
လက်ရှိ အမျိုးသားဒီမိုးကရေစီအစိုးရလက်ထက်တွင် မြစ်ဆုံစီမံကိန်းအား ပြန်လည်စတင်လာမည်ကို ပြည်သူ များအနေဖြင့် စိုးရိမ်လျက်ရှိသည့်အပြင် နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံ၏ တရုတ်နိုင်ငံခရီးစဉ်တွင် မြစ်ဆုံစာချုပ်အား လက်မှတ်ထိုးခဲ့မည်ကို စိုးရိမ်မှုများနှင့်ပတ်သက်၍ လူထုမီဒီယာမှ NLD ပါတီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဒေါတ်တာ မျိုးညွှန့်နှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။
မြစ်ဆုံနဲ့ ပတ်သက်ပြီး NLD ပါတီရဲ့ ရပ်တည်ချက် ဘယ်လိုရှိလဲ ….“မြစ်ဆုံနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကာလမှာ ပြောခဲ့တာတော့ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒါဟာ ရွေးကောက်ပွဲကတိက၀တ်တော့မဟုတ်ပါဘူး” ဒေါက်တာမျိုးညွှန့်(NLD ပါတီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ)“မြစ်ဆုံစီမံကိန်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်လမ်းညွန်တဲ့အတိုင်းပဲ နိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေး၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် အဖက်ဖက်ကနေ ရေရှည်ကိုကြည့်ပြီးတော့ ဆုံးဖြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဆုံးဖြတ်ပြီး တဲ့အခါမှာလည်း တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုအပြည့်နဲ့ ပြည်သူကို ဘာကြောင့်ဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုတာ ရှင်းပြမှာ ဖြစ်ပါတယ်” ဒေါက်တာမျိုးညွှန့်(NLD ပါတီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ)လက်ရှိ အမျိုးသားဒီမိုးကရေစီအစိုးရလက်ထက်တွင် မြစ်ဆုံစီမံကိန်းအား ပြန်လည်စတင်လာမည်ကို ပြည်သူ များအနေဖြင့် စိုးရိမ်လျက်ရှိသည့်အပြင် နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံ၏ တရုတ်နိုင်ငံခရီးစဉ်တွင် မြစ်ဆုံစာချုပ်အား လက်မှတ်ထိုးခဲ့မည်ကို စိုးရိမ်မှုများနှင့်ပတ်သက်၍ လူထုမီဒီယာမှ NLD ပါတီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဒေါတ်တာ မျိုးညွှန့်နှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။https://www.peoplemediamyanmar.com/%e1%80%bb%e1%80%99%e1%80%85%e1%80%b9%e1%80%86%e1%80%af%e1%80%b6%e1%80%94%e1%80%b2%e1%82%94-%e1%80%95%e1%80%90%e1%80%b9%e1%80%9e%e1%80%80%e1%80%b9%e1%81%bf%e1%80%95%e1%80%ae%e1%80%b8-nld-%e1%80%95/
Posted by လူထု မီဒီယာ on Friday, April 26, 2019
« ”AA အတွက် ငွေအလွယ်ဆုံးရှာဖို့က မူးယစ်ဆေးဝါးလို့ သုံးသပ်လို့ရတယ်” ဒေါက်တာနိုင်ဆွေဦး
သူရဦးရွှေမန်းဦးဆောင်သော (UBP) ပါတီ ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်များ ပါဝင်သော စုံညီ အစည်းအဝေးကို မေလ ၄ ရက်နေ့၌ နေပြည်တော်၌ ကျင်းပပြုလုပ်မည် »